ठिटा ठिटीहरुको कलाकारहरुलाइ टक्कर दिने नाच गुल्मीमा देखियो । पुरा भिडियो सहित हेर्नुह्स ! » लोक संगीत पारखी
ठिटा ठिटीहरुको कलाकारहरुलाइ टक्कर दिने नाच गुल्मीमा देखियो । पुरा भिडियो सहित हेर्नुह्स !
२० श्रावण २०७६, सोमबार ००:२६
बिस्तारै अब तिजको चहलपहल सुरु हुन थालेको छ । गाउँघरमा मादल बजाएर छमछमी नाच्ने दिदिबहिनीहरु अब बिस्तारै बढ्दै छन । धार्मिक एंबम पर्यटकिय स्थल गुल्मीको रेसुंगा पोखरीमा बिहीबार साउने औसीको दिन तिर्थालुहरुको घुँइचो थियो । यसै क्रममा धेरै महिला दिदिबहिनिहरुको जम्घट भयो । अनि त के कुरा तिजको गीतमा नाच्न सुरु भयो । औसीको दिन रेसुंगा पोखरीमा गएर नुहाउनाले हालसम्म गरेको पापहरु नष्ट हुने बिश्वासका साथ त्याहा जानेको भिड लागेको हो । पुजाआजा सकेर सबै भेला भई यसरी रमाइलो गरे ।
नाच्ने क्रममा तछाडमछाड भयो । हेरौ तिजको सोही रमाईलो भिडियो अबको क्रममा । यदि यो नाच यो भिडियो मन परेयो भने सबैले सेयर गर्न नभुल्नु होला । यस्तै रमाइलो भिडियो हरु हेर्न को लागि हामी लाइ सब्सक्राइब गर्न सक्नु हुनेछ । हेरौ यो रमाइलो तिज बेला गाउ घरमा देखिएको केहि दृश्य हरु महेश बोहरा गुल्मी बाट उहाको सहयोग मा ।
भाइरल बखत बिष्ट भेटिए नयाँ गर्लफ्रेन्डसंग, यसरि गरिरहेका छन् मस्ती, प्रतिभालाइ छाडेकै हुन् त ?
भाईरल २ जोडी जुम्ल्याहा दिदी-बहिनी एकैसाथ,को हुन यी अर्का जुम्ल्याहा दिदि बैनी,हेर्नुहोस भिडियो।
गौतम बुद्ध रंगशाला बारे बन्यो यस्तो गित , बन्छ नेपालिको …
ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका पाइलट बारेमा प्रभाकरको आयो यस्तो मनै रुवाउने गीत
दुबै भाइरलको भेटघाट , सङ्गै गाउदा त झन खत्रा सुनियो ( हेर्नुहोस भिडियो )
प्रकाश सपुत नाचेर हारेमा सम्झना लामिछाने मगर लाई बोकेर गाउँ घुमाउने पक्का...(भिडियो सहित)
भाईरल समीक्षा अधिकारीको स्वरमा नयाँ गीत “ब्युटी ब्युटी” सार्वजनिक ( भिडियो सहित)